Maqaallada Steve Kremer ee Martech Zone |
Maqaallada by Steve Kremer
Steve wuxuu isku sifeeyaa inuu yahay "dal yar, xoogaa xoogaa dhagax-n-duuban" oo ah farsamo yaqaan iyo suuqgeeye labadaba. Wuxuu dib uga soo noqday WISH-TV 1995-tii si uu uga mid noqdo Indy naqshadeeyayaashii ugu horreeyay iyo lataliyeyaasha. Intii uu ku gudajiray wuxuu u shaqeeyay bilowga oo ay kamid yihiin iProperty.com, Narrowline, Internetka OneCall, Vontoo iyo ChaCha halkaas oo uu ahaa shaqaale # 4 oo hadda ah Agaasimaha ChaCha ee Xayeysiinta Internetka.
Khadka ka bax, xarig ka qaad, ugu yaraan in muddo ah
Markii ugu horreysay waxaan kahelay khadka tooska ah waxaan helay e-maylkeygii ugu horreeyay horraantii 1995. Dabayaaqadii '95 waxaan bilaabay ganacsigeyga qaabeynta Webka. Haysashada shirkad aniga ii gaar ah waxay ula jeeday inaan ahaado onlayn oo ay heli karaan macaamiishaydu markasta. Had iyo jeer waan kuxiran jiray. Xitaa fasaxa waxaan keenay kombuyuutar gacmeedka NEC oo hadda ii shaqeeya. Markii waqtigu socday waxaan ku biiray bilowgyo kala duwan. Xitaa markaa marka fasax la galayo waxaa la filayay inaan ugu yaraan qaar qaato
Ha noqon dhibbane Malware Xayeysiis ah
Khamiis, Maarso 18, 2010 Khamiis, Maarso 18, 2010 Steve Kremer
E-mayl baa soo gala. Waad ku faraxsan tahay. Waa heshiis aad u sarreeya oo CPM ah oo ka socda xayeysiiyaha magaca weyn ee xayeysiinta ah. Ma aqoonsaneysid cinwaanka e-maylka soo diraha. Waxaad isleedahay naftaada: “Hmmn..exampleinteractive.com. Waa inuu noqdaa dukaan yar oo is-dhexgal ah oo astaamaha waaweyn adeegsanayaan ”. Waxaad dib ugu soo celineysaa emayl aad ku weydiisaneysid IO (Amarka Galinta) waxaadna bilaabeysaa inaad fiiriso liiskaaga xayeysiiska ee jira. Hore iyo gadaal ayaad ula socotaa iyaga, waxay ka walwalsan yihiin inay helaan